Nhau - Flexible Inopindirana Bulk Container
Usazviomesera zvenguva Bulk Container
FIBC inowanzo kuve inogadzirwa netambo dzakarukwa dzakakombama polypropylene, ingave yakaputirwa, uye inowanzo kuyera kutenderera makumi mana–Masendimita 48 (114–122 cm) muhupamhi uye unosiyana pakureba kubva pa100 kusvika 200 cm (39 kusvika 79 inches). Iyo inokwana inowanzo kwana kutenderera chiuru makirogiramu kana 2,200 lb, asi akakura mayuniti anogona kuchengeta zvakatowanda. Iyo FIBC yakagadzirirwa kutakura imwe metric ton (0,98 matani akareba; 1.1 mapfupi matani) echinhu pachayo anongorema chete mashanu–7 lb (2.3–3.2 kg).
Kufambisa uye kurodha kunoitwa pane chero mapallet kana nekuisimudza kubva muzvishwe. Masaga anogadzirwa neimwe chete, maviri kana mana anosimudza zvishwe. Bhegi rimwe chete reropa rakakodzera murume mumwe oparesheni sezvo pasina chikonzero chekuti wechipiri murume aise zvishwe pachirukwa chinosungira. Kubvisa kunoitwa nyore nekuvhurwa kwakakosha muzasi senge yekudonhedza spout, yeiko pane akati wandei sarudzo, kana nekungocheka kuvhura.
Rudzi urwu rwekutakura, jumbo bhegi, iri eco-inoshamwaridzika. Iine zvidimbu zviviri izvo chemukati chidimbu chiri 100% chinoshandiswa uye chekunze chinogadziriswazve. Mukuenzanisa nemadhiramu esimbi matsva, kupera kwayo kunenge zero zero uye hakudonhe.
Mhando dzeFlexible Intermediate Bulk Container
Mishonga - yakafanana nechikafu chegiredhi zvitupa
UN yakasimbiswa - ichafanirwa kuita bvunzo dzakawanda kuti ive nechokwadi chekuti inogona kumira kushushikana uye ichiri kubvisa kuparara kwezvinhu zvine ngozi
Kudya Giredhi - inofanirwa kugadzirwa mune yakachena kamuri nharaunda inova BRC kana FDA yakatenderwa
Ventilated FIBC - inoshandiswa mbatatisi uye mimwe michero / miriwo yekubvumira chigadzirwa kufema
Makwikwi akasimudza malupu
Vaviri Simudza zvishwe
4 Simudza zvishwe
Mhando dzekusimudza zvishwe
Standard simudza zvishwe
Cross kona kona simudza zvishwe
FIBC Mabhegi ane Liners
Zvigadzirwa izvo zvine guruva kana zvine njodzi zvinofanirwa kunge zvine polypropylene liner mukati meFIBC kubvisa kusefa kweiyo yakarukwa FIBC.
Liners inogona kugadzirwa kubva kuPolypropylene, Polyethylene, Nylon, kana simbi (Foil) liner
Type - A - hapana yakasarudzika magetsi ekuchengetedza maficha
Type - B - Rudzi B mabhegi haakwanise kugadzira kuparadzira burashi kuburitsa. Rusvingo rweiyi FIBC runoratidzira kuputsika kwemagetsi e4 kilovolts kana zvishoma.
Type - C - Inoitisa FIBC. Yakagadzirwa kubva kumagetsi inoitisa machira, yakagadzirirwa kudzora magetsi emagetsi nekuseta. Mucheka wakajairika unoshandiswa une tambo dzinoitisa kana tepi.
Type - D - Anti-static FIBCs, zvinonyanya kureva iwo mabhegi ane anti-static kana static dissipative zvivakwa pasina chinodikanwa chekumisikidza.